खुशीको खबर ! कुखुरा व्यवसायी संघद्वारा को’रोना सं’क्रमितलाई अण्डा र मा’सु बाड्दै ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/खुशीको खबर ! कुखुरा व्यवसायी संघद्वारा को’रोना सं’क्रमितलाई अण्डा र मा’सु बाड्दै !
२ भदौ, हेटौंडा । को’रोना सं’क्रमण भएर आइसोलेसनमा रहेका सं’क्रमितलाई अण्डा र मा’सु उपलब्ध गराउने भएको छ । मकवानपुर कुखुरा व्यवसायी संघले हेटौंडा–६, गौरीटार आइसोलेसनमा बसेका को’रोना संक्र’मितहरुलाई एक महिनासम्म प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दुईवटा अण्डा र हप्तामा दुई पटक कुखुराको मा’सु सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउने भएको हो ।
संघले करिब १४ हजार रुपैयाँ बराबरको को’रोना सं’क्रमितको सरसफाइमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री समेत आइसोलेसनलाई प्रदान गरेको छ । संघले एक महिनाका लागि करिब एकलाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको अण्डा र मासु उपलब्ध गराएको र अण्डा र मा’सु आइसोलेसनसम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
गौरीटार आइसोलेसनमा करिब ७० जना बिरामी रहेका छन् । यस्तै हेटौंडाको शिवम् सिमेन्टले आइासोलेसनमा बस्नेका लागि पानी तातो बनाउने २ वटा वाटर इलेक्ट्रिक डिस्पेन्सर उपकरण हस्तान्तरण गरेको हेटौंडा अस्पतालका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए ।